Soo dejisan Kate Mobile 20 – Vessoft
English, Українська, Deutsch, Polski...
Soo dejisan Kate Mobile
Kate Mobile – deg deg ah si ay u isticmaalaan codsiga inay ku wada xiriiraan shabakada bulshada VKontakte. Software ayaa lagu kala sooci karaa in ay tiro badan oo ah qaababka waxtar leh si loo hubiyo inay joogsatay oo raaxo leh oo ka tirsan shabakadda. Kate Mobile waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood, kuwaas oo ah isha ugu weyn ee ku yaalaan si raaxo leh in la shabakada bulshada shaqeeyo. Waxaa ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee software-ka waa naftu diiwaanka audio ee xasuusta khasnado, search sare ee content warbaahinta, goobaha dabacsan gaadhsiin, .Wadashaqayntaas xidhiidho iwm Kate Mobile ku siinayaan shaqada leh cinwaano dhowr ah oo si deg deg ah soo wareeganayo qaab u dhaxeeya. Sidoo kale Kate Mobile ah awood u siineysaa inay u astaysto font size iyo interface.
Xawaaraha sare iyo raaxadeeda
Set badan oo ka shaqeynayaan
Engine Advanced search
La shaqee xisaab badan
Iyada oo Advanced oo ka mid ah font iyo interface
Comments on Kate Mobile:
Kate Mobile Software la xiriira:
Network Bulshada Photo Software inuu sii joogo mid ka mid ah ugu booqday shabakadaha bulshada adduunka. Codsiga waxaa jira waxyaabo badan oo saamayn graphic iyo shaandhada ugu leh shuqulka wax ku ool ah oo la sawiro.
العربية, English, Français, Español... Badoo 4.54.2
Network Bulshada Tool inay ku wada xiriiraan shabakada caanka ah bulshada dadka isticmaala ee dunida oo dhan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u arkaan soo booqda bogga iyo qiimeyn sawiro ah.
العربية, English, Українська, Français... Facebook 101.0.0.18
العربية, English, Français, Español... WhatsApp Messenger 2.16.337
Network Bulshada Chat Mid ka mid ah Rasuullo ugu caansan si ay ula xiriiraan dadka isticmaala oo dunida ku. Software wuxuu taageeraa is-dhaafsiga files of noocyo kala duwan iyo isgaarsiinta ee CHAT kooxda.
العربية, English, Українська, Français... Facebook Messenger 93.0.0.15
Network Bulshada Chat Si sahlan ay u isticmaalaan Rasuul inay isgaadhsiin la yeeshaan saaxiibadood ka shabakadaha bulshada caanka ah. Software wuxuu taageeraa wicitaanada cod iyo video iyo sidoo kale hab video shirka.
العربية, English, Français, Español... Google+ 9.1.0.138578129
Network Bulshada Software ah inay la xidhiidhaan oo maamuli shabakada bulshada ee shirkadda caanka ah. Software isku xidhaya dhammaan adeegyada Google oo aad fulin karo ay .Wadashaqayntaas la account user ka.
العربية, English, Українська, Français... SoundCloud 2016.11.15
Network Bulshada Software waxay leedahay helitaanka mid ka mid ah adeegyada music ugu caansan. Codsiga waxaa awood u tahay in la raaco wararka ee adduunka music iyo baadhaan diiwaanka audio kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... Vine 5.42.1
Network Bulshada Software in la abuuro oo u arkaan video gaaban ee shabakadaha bulshada. Software ayaa awood u nalugu kanaalada video kala duwan, quudintooda warka u arkaan iyo ka tago comments in ay videos.
العربية, English, Français, Español... Tagged 6.22.1
Network Bulshada The shabakad bulsho caan ah oo u ogolaanaya inay la xiriiraan adduunka oo dhan oo ay taageertaa kulan gaar ah in dhiiri isbarteen ee dadka isticmaala.
English, Українська, Français, Español... Mamba 3.14
Network Bulshada Tababaraha waxa uu ku haboon si ay u helaan aqoon iyo isgaadhsiin. Codsiga waxaa awood u ah inay daawadaan axwaasha user ah, edit macluumaad shakhsiyeed oo ku siin doona hadiyadaha u dalwaddii.
العربية, English, Українська, Français... eBay 2.3.0.25
العربية, English, Français, Español... AccuWeather 4.3.4
العربية, English, Українська, Français... VK 4.5.2
Network Bulshada Codsiga waxaa si xor ah u isticmaasho shabakadda bulsho caan ah. Software ayaa awood u siro saaxiibo, content warbaahinta aragtida iyo faylasha sarrifka.
Ayna System Tababaraha file awood badan si ay u maareeyaan faylasha iyo codsiyada aad. software waxay leedahay qalab badan oo ay tayadoodii hawlgalka.